I, Robot Latsaka an-trano, fialamboly mahafinaritra sy sariaka miaraka amina feon-kira milay | Androidsis
Ampio i Charlie Dapperbot hody soa aman-tsara amin'ilay robot mahafinaritra I, Lavo
El fampiasana gyroscope Ny filalaovana lalao isan-karazany dia nahagaga tokoa tamin'ny andro voalohan'ny fitaovana finday ary androany dia tena tsara izy ireo amin'ny fametrahana ny smartphone amin'ny fomba miavaka toa ny familiana. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika milalao lalao video mitondra fiara izay ahafahantsika maka tsara kokoa ireo fiolahana ireo hahazoana fotoana fohy kokoa. Ary koa, ny fampiasana an'io sensor io dia tsara ho antsika mba hanana fotoana mahafinaritra amin'ny lalao hafa amin'ny lalao mahazatra, izay ahafahantsika mamindra ny finday hahay hisoroka ny sakana sasany.
Izy io dia ao amin'ny I, Falling Robot izay lasa manan-danja ny fampiasana an'ity sensor ity mba hahafahanao mahafantatra ny fomba fikirakiranao azy tsara. Lalao tsotra sy mahazatra izay tsy maintsy anampiantsika an'i Charlie Dapperbot hidina soa aman-tsara amin'ny fianjerana amin'ny lanitra tsy manam-petra. ny lalao mahafinaritra sy sariaka izay hahatafintohina anao ilay mazoto ary, amin'ny fotoana hitondranao azy mifehy azy, dia ho faly ianao fa voafantina tsara ny filalaovany. Lalao mamela anao hilalao ary misy toetra tsara tena mahaliana izay handresy anao tokoa.
1 Miankina amin'ny fahaizanao izany
2 Haavo 12 no miandry anao
3 Kalitao teknika
4 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Miankina amin'ny fahaizanao izany
Rehefa manomboka ny lalao dia tsy maintsy mandalo tutorial ianao izay hampianarina anao ampahany amin'ny lalao amin'ny lalao. Eto dia azonao atao mianatra mahay mandanjalanja handrefesana ny fihetsiky ny robot avy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny hafa mba hahafahanao mianatra mandositra ireo sehatra rehetra ireo izay hanatona anao mivantana. Zava-dehibe ny fiasan'ity sensor ity araka ny tokony ho izy, raha tsy izany dia hijaly be ianao mba hahazoana isa tsara.
Ankoatry ny fifehezana ny toetra dia afaka mandeha ianao fipihana eo amin'ny «fahavalo» samihafa hiseho toa ireo vorona ireo izy ireo, na ny fanesorana ireo tadin'ny akanjo izay hisorohana ny toetranao tsy hianjera tsara. Manana fiainana telo ianao alohan'ny hifaranan'ny lalao, ka tandremo ny toerana ahalavoanao, satria ny ain'ity robot cybernetika ity miaraka amin'ny satroka manokana no hiankina aminy.
Haavo 12 no miandry anao
Izaho, Robot Lavo manana Haavo 12 miaraka amin'ny fahasarotana mihombo ary samy hahitana sombin-mozika manome ny fikitihana manokana ny lalao ny tsirairay avy aminareo. Eto no ahafahantsika misintona an'ireo sarimihetsika taloha izay nilana mpitendry piano mba hamelomana ny seho sinema. Io teboka manokana miampy ny toetra tsara indrindra io dia manova ity lalao ity ho lasa iray izay tena tsy mitovy amin'ny hafa ary iza no mahay milalao ny karany tsara.
Ankoatr'izany gameplay izany dia manana ny zava-bita na birao mpitarika hanitatra ny androm-piainan'ny lalao ka hanaikitra anao amin'ireo mpilalao izay hanandrana hahazo isa avo indrindra azo atao. Amin'ireny karazana lalao ireny izay tsy dia misy atiny firy, ny zava-bita na ny birao mpitarika dia zava-dehibe hanohizana ny famporisihana ny mpilalao hilatsaka avy eny amin'ny lanitra.
Manana ahy ianao, Robot milatsaka maimaimpoana amin'ny Google Play Store. Atao doka ny lalao, miaraka a safidy hamafana azy manomboka amin'ny € 1,09 sy € 9,99. Anjaranao ny misafidy ny iray amin'izy ireo, satria raha mahaliana anao izany dia manana fomba fisaorana ny mpamorona an'ity olon-tsotra mahafinaritra ity mba hanohizany ny fanavaozana azy ary tsy ho ela dia handefa lalao video vaovao any amin'ny magazay Google.
Gaga izaitsizy tokoa feon-kira miaraka amin'io piano io izay hanasongadinana ny fianjeran'ilay mahery fo robot. Ny famolavolana toetra dia tena mahomby ary manova azy ho lasa tena mahafinaritra. Ny fampiasana monochrome koa dia mahavita mifanaraka amin'ireo ambin'ny singa rehetra ary, raha fintinina, dia hitantsika fa tena tsy dia misy dikany ny fanamboarana lehibe ary hita amin'izany fa nohomboana ny antsipiriany tsirairay avy. Mazava ho azy, araho tsara ny sensor, satria hiankina amin'ny fampidiranao teboka maromaro na vitsy kokoa.
Manoro hevitra anao aho ity mahazatra hafa izay misy ny hery misintona.
Naoty 4 kintana
I, Robot milatsaka
Famerenana ny: Manuel Ramirez
Fomba ankapobeny tsara
Sangan'ny mozika manaitra
Developer: Lucid Dream Party LLC
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ampio i Charlie Dapperbot hody soa aman-tsara amin'ilay robot mahafinaritra I, Lavo
Ampio ilay renitantely kely hamerina ny nectar rehetra amin'ity lalao poloney antsoina hoe HiveFall ity
EA Sports UFC, manadihady ny lalao ady tsara indrindra ho an'ny Android izahay